Waaxyada caafimaadka ee magaalada 'Sioux City metro' waxay soo sheegaan kiisas aad u yar oo ah COVID | KWIT
Waxa jira in kabadan 17,00 (17,031) xaaladood oo togan oo ku nool Nebraska iyo 231 degane oo dhintay.
Websaydhka 'coonavirus' ee Iowa wuxuu muujiyey in ka badan 24,400 xaaladood iyo 673 dhimasho ilaa galabta. Waxaa jiray sagaal dhimasho 24-saac gudahood.
Barnaamij xagaaga ah oo loogu talagalay ardayda Sioux City ayaan dhici doonin sanadkan.
Bekerka Bell ka dib, ogeysiis ku soo dir Facebook isagoo leh saacado badan oo aan la tirinaynin ka dib waxay yimaadeen go'aankaas. Sababtoo ah xannibaadyo ayaa la dhigay si dadka kale looga badbaadiyo COVID-19, waxay dareemeen in barnaamijku uusan siin karin qoysaska adeegyada ay mudan yihiin.
Gabdhaha Inc. ee Sioux City waxay qorshaynaysaa inay hawlaheeda ku gaabin karto xagaagan ardayda tirada yar. Barnaamijkooduna si dhakhso leh buu u buuxsaday. Gabdhaha Inc. waxaa la siiyaa qoysaska u baahan caawimaad, bilaash ah 'Grab' n Casho Go ', Isniinta ilaa Jimcaha laga bilaabo 4:30 illaa 5:30 p.m. Cunnooyinka waxaa heli kara qof kasta oo da'diisu tahay 18 sano iyo wixii ka yar, oo ay ku jiraan waalidkood ama daryeelayaashooda.
Xafladda qalin-jabinta dibedda waxaa loo qorsheeyay Sabtida soo socota, Juun 27deeda Dugsiga Sare ee Heelan ee Sioux City. Dhacdada waxaa loo qorsheeyay 5 p.m. Goobta lagu xusuusto. Sidoo kale waa la dhageysan doonaa telefishanka. Munaasabadda ayaa markii hore loo qorsheeyay May 17-keedii, laakiin waa la baajiyay cudurka faafa darteed.
Xarunta Farshaxanka Magaalada 'Sioux City Art Center' ayaa sheegtay in xarunta ay wali usbuucyo ka fog tahay taarikhda dib u furitaanka degganeyaasha ah. Agaasimaha xarunta ayaa sheegay inaysan jiri doonin xerooyin farshaxan xagaaga ama fasallo kale oo usbuucyo badan leh. Qeybta waxbarashada ee Xarunta Farshaxanka waxay ka shaqeyneysaa horumarinta fasalada khadka tooska ah ee xagaaga dambe. Waxaad ka heli kartaa daraasiin fiidiyowyo ah oo lagu dhajiyay khadka tooska ah. Intaas waxaa sii dheer, shaqo ayaa loo qabtaa si loogu abuuro mashaariic farshaxan-guri oo loogu tala galay boqolaal carruur agoon ah oo ku jira barnaamijka Waxqabadka Bulshada ee Community Action Agency.
Xarunta Farshaxanka waxay leedahay hada waxay qorsheynayaan inay horay usocdaan xaflada farshaxanka bannaanka ee ArtSlpash ee usbuuca usbuuca shaqaalaha. Ku dhawaaqis rasmi ah ayaa la filayaa horraanta Luulyo. Qorshayaasha ayaa isku beddeli kara digniin yar. Qabanqaabiyeyaasha ayaa raba inay ka dhigaan xafladda mid raaxo leh oo ammaan ah intii suurtogal ah.
Guddoomiyaha Gobolka Iowa Kim Reynolds wuxuu fududeynayaa xannibaado dheeri ah oo la dhigay si loo
By Halima Osman & Mulki Osman • Jun 10, 2020
Guddoomiyaha Gobolka Iowa Kim Reynolds wuxuu fududeynayaa xannibaado dheeri ah oo la dhigay si loo yareeyo faafitaanka coronavirus.
Intii lagu guda jiray shir jaraa'id subaxnimadii Arbacada, Reynolds wuxuu sheegay in laga bilaabo Jimcaha 8-da aroornimo, ganacsiyada sida makhaayadaha, baararka iyo tiyaatarada ayaa ka shaqeyn kara 100% awooda.
Waa inay wali raacaan tilmaamaha leexinta bulshada.
Sidoo kale dib ayaa loo furi karaa barkadaha dabaasha, xarunta sare iyo barnaamijka xannaano maalmeedka dadka waaweyn.